Alakamisy 17, 2011 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
LinkedIn manana mpikambana 135 tapitrisa mahery eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ny salanisan'ny karaman'ny mpampiasa LinkedIn dia mihoatra ny $ 100,000 isan-taona! Ny zavatra voalohany ataoko miverina amin'ny dia ataoko na fivoriako dia ny mampiditra ny fifandraisana amiko rehetra ao amin'ny LinkedIn, mijery ny mombamomba azy ireo, ary mahita hoe iza no tokony harahiko. Raha ny marina dia tsy manaiky ny tohiny akory aho… raha tsy manana profil LinkedIn feno ianao dia io no fitokonana voalohany atao aminao.
LinkedIn no soavaly maizina ao amin'ny media sosialy. Fantatsika rehetra fa misy izy io, saingy vitsy no mampiasa azy io araka izay tratry ny ananany. Fahadisoana lehibe io, indrindra rehefa resaka marketing ny orinasanao. Ity fiofanana momba ny tobin'ny LinkedIn ity dia hanome anao fitaovana ilaina amin'ny fampiasana ny tranokala ho an'ny orinasanao sy ny varotrao manokana. Avy amin'ny Mindflash Sary torohay.
Ny hany ilaiko momba ny LinkedIn dia ny fidinan'ny kalitaon'ny vondrona amin'ny fidinana an-tsokosoko miaraka amin'ireo spammer ary hahazo gurus haingana amin'ny vola. Ary koa, tsy mbola nahita fampandrenesana tamin'ny dokambarotra LinkedIn izahay. Toa toerana tokana izy io ho an'ireo olona mpandraharaha. Misitrika izy ireo, mahazo izay ilainy ary mivoaka. Toa tsy misy na inona na inona manery ny fitazonana mpitsidika any.
Tags: orinasa mifandrayLinkedIntambajotra mifandraysetup linkin
Ny sanda sy ny ROI avy amin'ny kaonferansa